रारा र चन्दन | मझेरी डट कम
२०४६ सालको बहुदल घोषणापछि राजनीतिक पार्टीहरूको राजकाज सुरु भयो । प्रायः राजनीतिज्ञहरू आफ्नो सङ्घर्षको बदलामा राजसी सुखभोगमा लिप्त भए । सायद भागबन्डा नमिलेको हुनसक्छ, तर केही राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो लक्ष्य देश बनाउनु र जनताको जीवन स्तर उकास्नु हो भनेर बाउँटिए । तिनले दुर्गममा पसेर माओवादको नाममा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरे । यो आन्दोलन सरकार र माओवादीबीच पूरै दश वर्ष चल्यो । यस आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी सर्वसाधारण पेलानमा परे । धेरैको ज्यान गयो । केही माओवादी र सरकारी सुरक्षाकर्मीहरू पनि शहीद भए । हजारौँ हराए । हजारौँ घाइते भए । अन्ततः सरकार र माओवादीबीच सम्झौन्ता भयो । त्यसपछि चुनाव । चुनावमा पूरै बहुमत प्राप्त नभए पनि अग्रपङ्तिमा आयो माओवादी । सानो पार्टीको साथ पाएर माओवादीले बनायो सरकार । जनयुद्धको मारमा परेका सर्वसाधारणले राहतको सास फेरे । जनयुद्धलाई साथ दिने निमुखा जनताहरूले दशैँ मनाए । माओवादीका घाइते लडाकुहरूको मनको पीडा उड्यो । तनको पीडाका लागि पनि आफ्नो सरकारबाट उचित राहतको आश्वासन पाए ।
त्यो पिँजराको डोरीले काटेर मेरा श्रीमाङ्का हातबाट मासु झर्दै थियो । त्यो दर्दनाक दृश्यले मेरो मुटु भक्कानिएर आयो । ती जादुगर भनाउँदा कसाइँहरूको व्यवहारले मलाई छिटै श्रीमाङ्को सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो ।
बुबा ! यो अस्पतालका कसाइँहरूले मेरा श्रीमान्लाई मारेर पनि मसँग औषधी मगाउँथे । औषधीको एउटा पोको बनाई राखेका थिए । म औषधी पसलबाट त्यो पोको अप्रेसन रुमको गेटमा पुर्याउँथेँ, त्यो पोको फेरि औषधी पसलमै पुर्याइहाल्दा रहेछन् । फेरि मसँग मगाउँथे । पसले त्यही पोको र पचास हजारको बिल दिन्थ्यो । प्रत्येक दिन मेरो खल्तीमा एक–दुइटा बिल जम्मा हुँदै जान्थे । मेरा श्रीमान्लाई पनि थाहा छ । अस्पतालको बक्यौता तिरेर हाम्रो लास जलाउने काम नगर्नु होला । अब हामी यो अस्पताल छोड्दैनौँ ।” ... ...रारा ।
लेखोट सुन्नेहरूको जीउमा काँडा उठे । तैपनि अस्पतालको प्रशासनले चन्दन र राराको लास निकाल्नलाई चार लाखको अड्डी थापिरह्यो ।
अन्ततः पर्वत पहाडीले भने, “उजुरी दिउँ भन्या सपनाकन प्रमाण मान्न्या हुइनन्, चार लाख तिरिकन काँ लैजाऊँ यी लास ? आर्यघाटमा पोल्नलाई पनि पैसै चाइन्या हुनन् ? मृतकको इच्छा पनि यै अस्पतालै बस्न्या रहेछ, डाक्टरौ ज्या अद्याछौ अर ?” आँखैभरि आँशु समेत गाउँलेहरूसँगै गाउँ फर्के पर्वत पहाडी ।
अस्पतालमा चन्दन र राराको आत्माको रजाइँ बढ्दै गयो । त्यहाँका कर्मचारीहरू कोही भागे त कोही तिनकै सिकार भए । अन्ततोगत्वा अस्पताल पूरै खण्डहरमा पऋणत भयो । अब त्यस अस्पतालमा रातीराती तिनै आत्माको थ्रिल्लर चलिरहेको सुनिन्छ ।
...खोजखोज खोजखोज ... खाउँला, खोजखोज खोजखोज, खाउँला.... डाक्टरहरू काँ लुके ...? ऊ... हु हु..., खोजखोज खोजखोज... खाउँला, खोजखोज खोजखोज, खाउँला... । डाक्टरहरू ... ऊ... हुहु...।
तीन हाईकु (प्रभात घाम)
"नेपाली साहित्यमा हङ्कङको योगदान" शोधपत्रमा विमर्श
अझै पनि मुनामदन नै बिक्छ
म आउँदैछु तिम्रो शहरमा
उनले अन्तै तन दिएछ